वृष राशिका लागि कुन रंग र कुन बार शुभ ? – Complete Nepali News Portal
वृष राशिका लागि कुन रंग र कुन बार शुभ ?
वृष राशि भनेको इ ऊ ए ओ वा वी वू वे वो अक्षरबाट नाम आउने व्यक्ति भन्ने बुझ्नु पर्छ । वृष राशिका लागि कुन रंग र कुन बार शुभ जान्नु अघि यो मन्त्र सबैले एक साथ भनौँ, मेधावी सुरतप्रियः परगृहैर्वित्तैश्च संयुज्यते । कन्यायां परदेशगः प्रियवचाः कन्या प्रजोऽल्पात्मजः।।
राशिहरूको एउटा घेरा अथवा समूह हो जसको माध्यमबाट सूर्य, चन्द्रमा, र ग्रह आकाशमा विचरण गर्छन । त्यसो त, राशी काल्पनिक तारापुञ्ज हुन् । ज्योतिषिय क्षेत्रमा राशिलाई १२ भागमा विभाजन गर्ने गरिएको छ, जुन यस प्रकार छन्, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मिन । आज हामी तपाइलाइ वृष राशिका बारेमा विशेष जानकारी दिन गैरहेका छौँ ।
यहाँ हामीले ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृष राशिका लागि कुन कुन रंग र कुन कुन बार शुभ फल दिने खालका हुन्छन भनेर चर्चा गरेका छौ । आशा छ, यसले तपाइको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने छ ।